Coinbase biiray Earn.com - Blockchain News
Coinbase biiray Earn.com
sarrifka Cryptocurrency Coinbase ayaa ku dhawaaqay iibka ee Earn.com, ayaa lagu soo waramayaa for $ 120 milyan.
Earn.com, mid ka mid ah GOORMUU industry ee ugu fiican maal, oo hore loogu yaqaanay 21 Inc. orday hawlgal macdanta Seeraar, ku shaqeeya by technology ka Intel, iyo ka dib bilaabay in ay sameeysa diiradda “21 Seeraar Computer” in 2015.
Shirkadda bixiyay in Earn.com October ee la soo dhaafay in pivot a arkay waxay bilaabi shabakad bulshada loogu talagalay incentivizing dadka isticmaala ay u dhamaystiraan hawlaha beddelkeeda abaal cryptocurrency.
Toddobaadkan Coinbase dhawaaqay: “Heli ayaa dhisay wax soo saarka bixisay email in muran waa mid ka mid ah codsiyada blockchain wax ku ool ah horeyn in ay gaaraan jar macno leh. Waxaan dhawri doonaa Heli ee ganacsiga orodka sababtoo ah waxa uu muujinaya badan oo ku saabsan ballankii oo iman kara.”
Bank of America soo degayaa ...
Post Previous:Germany ee No. 2 qorshayaasha stock exchange for hordhaca ah ee Trading Crypto ku App
Post Next:Somailand Caymiska Marsh shaqeeya IBM on boosteejo Blockchain
fulin ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 8, 2018 at 5:53 PM